အမျိုးပျောက်စေနိုင်သော ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေ၏ "အဟ" တစ်ခု - News @ M-Media
in သူ့အမြင် — August 9, 2017
” ၈၂ခုနှစ် ဥပဒေ နဲ့ အညီ စီရင်ဆုံးဖြတ်ပါ။” ဆိုသည်ကို မကြာခန တွေ့နေရပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ လွှတ်တော် မှာ ပြန်ဆွေးနွေး မခံသော၊ မဆလ အမွေခံဖြစ်သော၊ ဦးနေဝင်း၏ လက်ကျန်အမွေဖြစ်သော၊ ဤ ဥပဒေ ကို ဘာကြောင့်လက်မလွှတ်နိုင်ရပါသလဲ ဆိုသည်မှာ စိတ်ဝင်စား စရာပါ။
ဥပဒေပညာ နှင့် တရားစီရင်ရေးနည်းစံနစ်များ လူထု နှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာနေရလို့ ဖြစ်ပါမည်။
၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေ တွင် တိုင်းရင်းသား မိဘနှစ်ပါးက မွေး ပါမှ အလိုလျောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါသည်။
ကျန် သူများ သည် ဥပဒေ အရသာ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ရသည်။ ထိုသူများ ကို နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးငှာ နိုင်ငံသား အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခွင့် ရှိပါသည်။ထိုသူ များ သည် မည်သည့် အခါ တွင်မှ တိုင်းရင်းသား တို့ကဲ့ သို့ အခွင့်ရေး ရမည် ကို ဥပဒေ တွင် မဖေါ်ပြထားပါ။
ထိုဥပဒေ ပေါ်လာရသည့် အကြောင်းနောက်ခံထဲက တစ်ခုမှာ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေး၊ရွှေဟင်္သစစ်ဆင်ရေး တို့ နောက်ခံဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်နယ် လူဝင်မှုပြဿနာလည်း ပါပါသည်။
ဦးနေဝင်း၏ မဆလ လွှတ်တော် မှ ကသောကမြော ထုတ်လုပ်လိုက် ရသော ဥပဒေတို့၏ ထုံးစံ အတိုင်း ဟိုကျန် သည်ကျန်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးသည်။
၁၉၄၈ခု စီတီဇင်အက် အရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရှိသူ နှင့် သက်ဆိုင်သော ပုဒ်မ တစ်ခုကျန်ခဲ့ပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီအမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြီး ဖြည့်စွက်ပြဌာန်းခဲ့ရပါသည်။
ဥပဒေတွင် ရှင်းလင်းသောပြဌာန်းမှုများ ကျန်နေပါသဖြင့် အားနည်းချက် အကြီးကြီး ရှိနေပါသည်။
အမျိုးကွယ်ပျောက် စေမည့်ဥပဒေ လို ဖြစ်နေပါသည်။ မည်သူ မှ ဘာမှ လုပ်ရန် မလိုပါဘဲ ကာလ ရှည်ကြာလာလျင် မြန်မာပြည်တွင်”ဗမာတိုင်းရင်းသား စစ်စစ်” များ ၈၂ခု ဥပဒေ အရ လျော့နည်း ကွယ်ပျောက်ပါလိမ့်မည်။
အိန္ဒိယ နှင့် တရုပ် သွေး နှော သော တိုင်းရင်းသား မဟုတ်သည့် သွေးနှော ခေါ် ကပြား ခေါ် ဥပဒေအရဖြစ်သည့် နိုင်ငံသားများသည် လည်း မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူ လူများစု ဖြစ်လာပါ လိမ့်မည်။ အစိုးရ များသည် လည်း ထိုမဲဆန္ဒရှင်တို့ကို အလေးထား ရပေလိမ့်မည်။
အမျိုးသားရေး သမားတို့ စိုးရိမ်နေသော ကိစ္စမှာ ၈၂ ခုနှစ် ဥပဒေအရ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသည်ကို ရှင်းပါမည်။ ဥပဒေ အရ နှစ်မည်မျှကြာကြာ ကပြား တို့ တိုင်းရင်းသား မဖြစ်။ ဖြစ်ခွင့်လည်း မပေးထား။
ဥပဒေ အရ သွေးနည်း သွေးများ ပိုင်းခြား ခွဲမပေးထား။ နည်းလမ်းမပြထား။အထက်ဆက် မှာ သွေးတစ်ကြောင်း နှောလျင် အောက်ဆက်များ ဆင်းသမျှ ကပြားဖြစ်ပေရတော့မည်။
၁/၂ပုံ ၊ ၁/၄ပုံ ၊၁/၈ ပုံ ၊ ၁/၁၆ပုံ၊၁/၃၂ ပုံ၊၁/၆၄ ပုံ၊၁/၁၂၈ပုံ အစရှိသည်ဖြင့် မည်သို့ နှောနှော၊မည်မျှနှောနှော တိုင်းရင်းသား မဟုတ်တော့၊မစစ်တော့ ဆိုလျင် ကပြားများ က လူများစု ဖြစ်လာမည်လား? ဗမာ စစ်စစ် ဆိုသည်က လူများစု ဖြစ်လာမည်လား?
သင်္ချာ နဲ့တောင် တွက်ကြည့်ရန်မလိုပါ။
“နို့”ထဲ” ရေ” ရောလျင်လည်း” ရေ”။
“ရေ” ထဲ”နို့” ရောလျင်လည်း” ရေ”
ဆိုသည့် သဘောဆောင်သည့် ဥပဒေ အောက်တွင် ကြာလာလျင်”နို့စစ်စစ်” မှာ မရှိသလောက် ရှားပါလိမ့်မည်။
နှစ်ကာလများ ရှည်ကြာမှ ဖြစ်လာပါမည်။
တစ်နေ့တော့ ဖြစ်လာမှာလည်း သေချာပါသည်။
ကောင်းပါသည်။ပြည့်စုံပါသည်။ပြုပြင်စရာမရှိပါ ဟု ဆိုသော ၈၂ ခုနှစ် ဥပဒေ၏ “အဟ” တစ်ခု ပါ။
ရေးသူ- Facebook User တစ်ဦး
Tags: 1982 citizenship law